Thumbnails view မှာ file name မပေါ်လို့ - MYSTERY ZILLION
Thumbnails view မှာ file name မပေါ်လို့
Photo တွေကို folder ထဲမှာ ထည့်ထားပြီး view တော့ thumbnails view မှာ file name တွေမပေါ်တော့တာဘယ်လိုဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ၊ ဘယ်လိုပြင်ရလဲမသိဘူး။ file တွေကို copy ကူးပြီး တော့ နောက်ထပ် folder တစ်ခုထပ်ဆောက်ပြီးထည့်ကြည့်တော့ file name တွေပြန်မြင်ရပြန်ရော။ window နဲ့များဆိုင်လားမသိဘူး
အမြဲတမ်းတော့မဖြစ်ဘူး တစ်ခါတစ်လေထဖြစ်တာ။ do not cache thumbnails အမှတ်ဖြုတ်တာနဲ့များဆိုင်လားမသိဘူး။ ကြုံဘူးသူများပြောပြပါဦး။
ဟုတ်ကဲ့။ Thumbnails View မှာ file name မပေါ်တာ shift key နှိပ်ထားလို့ပါ။ Start> My pictur >Sample picture ကိုသွားပါ။ Right click > View > Details ကိုရွေးပါ။ picture ကို detail အနေနဲ့ပြပါလိမ့်မယ်။အခု shift key ကိုဖိ
ထားပြီး Right click > View > Thumbnails ကိုနှိပ်ပါ။ photo တွေရဲ့ file name ပျောက်သွားပါပြီ။ပြန်ဖော်ချင်ရင် details view ကိုသွားပါ။ shift key နှိပ်ထားပြီး Thumbnails view ကိုပြန်သွားလိုက်ပါ။ photo ရဲ့ file name ပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
အစ်ကိုအတွက်ကလွယ်နေပေမယ့် ကျနော်လို့ငပိန်းလေးကတော့ အရမး်ကို တန်ဖိုးရှိတယ်ဗျာ. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က ဖိုင် nameတွေကို မြင်ချင်တာမဟုတ်ဘူး. ကျေးဇူးပါပဲ.